काठमाडौंको धुलाम्मे सडकलाई अभिनेत्री जुहीको झापड ! – आफ्नो प्रेरक संसार
काठमाडौंको धुलाम्मे सडकलाई अभिनेत्री जुहीको झापड !
Bibas chetan — १८ असार २०७५, सोमबार ०४:०५0comment
काठमाडौं । काठमाडौंको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने उराठ लाग्दो छ । पानी प¥यो भने हिलाम्मे, र घाम लाग्यो भने धुलाम्मे । काठमाडौंको पर्यटकिय क्षेत्रहरुको सडक पनि हिलाम्मे र धुलाम्मे नै छ ।
बलिउड अभिनेत्री जुही चावला अहिले काठमाडौंको भ्रमणमा छन् । केही दिन अघि चुपचाप भारतबाट काठमाडौं आएकी जुहीको भ्रमण सकिनै लागेको छ । काठमाडौंको सडकहरुको कन्त-बिजोकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत गज्जबको झापड हानेकी छन् ।
काठमाडौं, भक्तपुर, धुलिखेल लगाएको ठाउँहरुको अवलोकन गरिसकेकी जुहीले आफ्नो ट्वीट गर्दै काठमाडौंको अस्तव्यस्त सडकमाथि दह्रो व्यांग्य गरेकी छन् ।
उनले ट्वीट गर्दै लेखेकी छन्, ‘जब काठमाडौंमा हामीले आफ्नो कुरिरहेका थियौं, धेरै धुलो, धेरै ट्राफिक, त्यस्तै धेरै डिजेल र पेट्रोलको वायु प्रदुषण । हामीले आफ्नो अनुहारनै छोप्नु प¥यो । प्रत्येक दिन यहाँका लोकल मान्छेहरुले सर्जिकल मास्क लगाएतर हिँड्छन् ।’
जुहीले यस्तो ट्वीट गरेसँगै एउटा फोटो पनि पोष्ट गरेकी छन् । जहाँ पाँच जना उभिरहेका छन् । सायद उनीहरुले आफ्नो गाडीलाई कुरिरहेका होलान् । उनीहरु पाँचै जनाले आफ्नो अनुहरलाई रुमालले छोपेका छन् ।
प्राय नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकले नेपाल तथा काठमाडौंको सुन्दरताको बारेमा खुलेरै प्रसंसा गर्छन् । तर बलिउड अभिनेत्री जुही चावलाले भने ठीक उल्टो धुलाम्मे काठामाडौंको नांगो तस्विर सार्वजनिक गरेकी छन् ।